माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा कति पर्यो आवेदन ? - Dainikee News::
माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा कति पर्यो आवेदन ?
काठमाडौं, कात्तिक १७ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको साधारण शेयरमा लगानीकर्ताले उल्लेख्य सहभागिता जनाएका छन् ।
बिहीबारदेखि बिक्री शुरु भएको साधारण शेयरमा शुक्रबार दिउँसोसम्ममा १ लाख १६ हजारले आवेदन गरेका छन् ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले बिक्री शुरु भएको दुई दिनमै मागभन्दा बढी रु दुई अर्ब २२ करोड बराबरको आवेदन परेको हो ।
कम्पनीले यही कात्तिक १९ गतेसम्म साधारण शेयर बिक्री गर्ने समयसम्म करीब छ गुणाको आवेदन पर्ने अनुमान छ ।
कम्पनीले गत बुधबार मात्रै दोलखावासीका लागि बिक्री गरेको साधारण शेयरको बाँडफाँट गरेको थियो ।
सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो ।
हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपिओमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
आईपिओमा छिटोमा कार्तिक १९ गतेसम्म र त्यस अवधिमा माग अनुसारको आवेदन नपरेमा मात्र ढिलोमा मंसिर १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको आईपीओको लागि नागरिक लगानी कोष बिक्री प्रबन्धक छ भने सनराइज क्यापिटल सहबिक्री प्रबन्धक हो ।
कसले आवेदन दिन पाउने ?
यस अघि आवेदन दिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारी र स्थानीयबासीले आवेदन दिन नपाइने विक्री प्रबन्धकले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ /Saturday, November 3rd, 2018, 8:09 am